Jaamici Basaasnimo u xuub siibtay | Qaran News
Jaamici Basaasnimo u xuub siibtay
Writen by Qaran News | 10:19 am 27th Jul, 2020
Jaamicigii basaasnimada u xuub siibtay
Jun Wei Yeo oo ah nin u dhashay dalka Singapore isla markaana ahaa arday diyaarinayay shahaadada saddexaad ee Jaamacadda ee PhD-ga ayaa sanadkii 2015 lagu casumay bandhig aqooneed ka dhacayay magaalada Beijing ee dalka Shiina.
Waxa uu xilligaasi wax ka qorayay arrimo la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha, isaga oo si gooni ah ugu dedaalayay in uu helo xog ku saasban sida dalkaasi Shiinaha uu doonayo in uu caalamka saameyn ugu yeesho oo uu u noqdo quwad aan la dhayilsan karin.
Ka dib markii uu khudbad cilmiyeysan ka jeediyay bandhigaasi ayaa Jun Wei oo sidoo kale loo yaqaan Dickson waxaa u yimid dhawr qof oo sheegay in ay u shaqeeyaan machadyo cilmi-baaris oo Shiinaha laga leeyahay. Waxa ayna u sheegeen in ay doonayaan in uu u soo diyaariyo warbixinno la xiriira arrimaha siyaasadda isla markaana ay lacag ku siinayaan. Markii dambe ayay u xaqiijiyeen in ay doonayaan in uu la wadaago wararka xanta ah ee laga helayo dadka ka ag dhow goobaha ay macluumaadkani ka doonayaan.
Isla markiiba waxa uu ogaaday in dadkani ay yihiin mukhaabaraadka Shiinaha balse waxaa uu sii waday xiriirkii uu la lahaa, sida lagu sheegay dukumeentiyo la hor keenay maxkamad ku taal dalka Mareykanka. Ugu horreyn waxaa laga codsaday in uu diiradda saaro waddamada Koonfur Bari qaaradda Aasiya balse markii dambe ayaa loo caddeeyay in ay doonayaan arrimaha dowladda Mareykanka.
Sidaa ayuuna Dickson Yeo ku noqday basaas u shaqeeya dowladda Shiinaha, oo markii dambe isticmaalayay shabakadda LinkedIn oo ah shabakad dadka shaqo doonka ahi ay macluumaadkooga ku keydiyaan, shirkad aan jirin iyo in uu iska dhigo aqoonyahan si uu u helo xogta shakhsiyaad iyo shirkado Mareykan ah.
Shan sano ka dib, xilli ay xiisad ba’an u dhaxeyso Mareykanka iyo Shiinaha ayaa Yeo waxa uu maxkamad ka hor qirtay in uu u shaqeynayay quwad shisheeye oo ah dalka Shiinaha. Ninkan oo 39 sano jir ah ayaa muteysan kara qiyaastii toban sano oo xabsi ah.
Huang Jing oo ahaa barihii jaamacadeed ee Yeo ayaa sanadkii 2017 waxaa laga eryay dalka Singapore, waxaana lagu eedeeyay in uu ahaa basaas u shaqeynayay waddan shisheeye oo aan la shaacin midka uu yahay. Balse Huang Jing waxa uu mar kastaa beeninayay eedeymaha loo haysto, waxa uuna markiiba u wareegay dhanka madagaalada Washington DC, haatanna waxa uu ku nool yahay Beijing.
Sida ku cad dukumeentiyo laga helay maxkamadda, Yeo waxa uu xubno ka tirsan sirdoonka Shiinaha kula kulmay dhawr meelood oo kala geddisan oo gudaha dalkaasi Shiinaha ah.
Sida la sheegay waxaa mararka qaar loo diray in uu xog muhiim ah ka soo uruuriyo waaxda ganacsiga ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale xog ku saabsan muranka ganacsi ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha.
Bilahari Kausikan oo ahaan jiray xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Singapore ayaa sheegay in marnaba uusan shaki ka qabin in Dickson uu ogaa in uu la shaqeynayay sirdoonka Shiinaha.
Yeo waxa uu in badan xiriir la sameeyay dadkii bartilmaameedkiisu uu ahaa isaga oo adeegsanaya shabakadda LinkedIn, oo ah shabakad ay adeegsadaan in kabadan 700 oo milyan oo qof. Dadka uu bartilmaameedsanayay waxaa ka mid ah shaqaalihii hore ee dowladda Mareykanka, shaqaalaha ciidamada milatariga iyo dadka ka shaqeeya arrimaha gaashaandhigga, kuwaasi oo inta badan macluumaadkooga soo dhigayay shabakaddan LinkedIn, iyaga oo ka sheekeynaya waxyaabihii ay ka soo shaqeeyeen si ay u soo jiitaan dadka iyo shirkadaha doonaya in ay ka faa’iideystaan aqoontooda iyo xirfaddooda.
Balse mukhaabaraadka shisheeye ayaa inta badan arrimahan aad ugu baahan. Sidaa awgeed, dadka uu Yeo doonayay in uu xogta ka helo ayuu u dirayay in ay warbixinno u soo qoraan shirkad been abuur ah oo la magac ah shirkad caan ka ah caalamka. Ka dib macluumaadkaasi ayuu u gudbinayay mukhaabaraadka Shiinaha ee uu la shaqeeyo.
Mid ka mid ah dadka uu xiriirka la sameeyay waxaa ka mid ah nin u shaqeynayay ciidamada cirka ee Mareykanka, gaar ahaan kuwa diyaaradaha dagaalka ee F-35, kaa oo maxkamadda u caddeeyay in uu aad lacag ugu baahnaa. Nin kale oo uu la xiriiray ayaa u shaqeynayay waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon, kaasi oo uu siiyay laba kun oo doolar si uu warbixin uga diyaariyo sida ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afqaanistaan ay u saameyn karaan danaha dalka Shiinaha.
Shabakadda LinkedIn ayaa aad uga caawisay Yeo in uu helo xogta iyo lambarrada dadka uu doonayo in uu la xiriiro.
Sida lagu sheegay dukumeentiyada maxkamadda, la taliyeyaasha Yeo ayaa ku booriyay in marka hore uu qofku weydiiyo in uu nacay shaqada uu hayo iyo in uu lacag u baahan yahay oo ay haysato dhibaato dhaqaale.
Sanadkii 2018, Yeo waxa uu soo xayaysiiyay shaqo aan jirin. Waxa uu u sheegay baarayaasha dacwaddiisa gacanta ku haya in ay soo gaareen codsiyo gaaraya ilaa 400 oo qof, kuwaa oo 90% ahaa shakhsiyaad ka tirsan ciidanka milatariga Mareykanka iyo kuwa dowladda, kuwaasi oo macluumaadkooga uu u sii gudbiyay mukhaabaraadka Shiinaha.
Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in arrinta Yeo ay ka turjumeyso sida Shiinuhu uu u xadayo xogta shirkadaha iyo shakhsiyaadka Mareykanka ah, iyada oo la adeegsanayo shakhisyaad aan Shiinaha u dhalan oo ka yimid waddamo kale.